ဦးဝင်းတင်ပြောပြတဲ့ မသေခင် တွေ့ချင်ရခြင်းအကြောင်း (မောင်မိုးသူ) | MoeMaKa Burmese News & Media
Interview with U Win Tin - How Long it takes for us ...
Interview with U Win Tin - 8888, The success or the failure?
Interview with U Win Tin - Ready for Change?
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်)။ ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၄
(ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) ကဏ္ဍအတွက် မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း)
“ကျုပ်က “ခင်ဗျားမသေခင်” တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတာပါ။ တခြားမတွေးပါနဲ့” ဟူသော ဦးဝင်းတင်က ဆိုလိုက်တော့မှ ဘကြီးမိုး ရယ်နိုင်ပါတော့သည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:U Win Tin, ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်